अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउन सक्दैनौ :शिक्षामन्त्री पौडेल
असोज १९, काठमाडौं । सरकारले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने कुरा आफ्नो अधिनमा नरहेको बताएको छ ।
बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोबिन्द केसी अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्नेसहित चारबुँदे माग राखेर असोज १० गतेदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसनमा रहीरहेका बेला सरकारको यस्तो बताएको हो ।
हाल डा. केशीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन ।
तर, सरकारले भने केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलका अनुसार मंगलबार राति अबेरसम्म सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाइन्सका प्रतिनिधिसँग वार्ता भएको थियो । र, बुधबार पनि वार्तामा बस्ने तयारी छ ।
साथै सरकारका प्रतिनिधिले डा. केसीलाई नै भेटेर सहमति कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउने योजना छ ।
संसदको नियमावली अनुसार तीन सांसदले महाअभियोग प्रस्तावका लागि निवेदन दिन सक्छन् । र, यसलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले अघि बढाउने नबढाउनेबारे छानविन गर्नेछ । त्यसपछि पनि सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै संसदको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । र, दुई तिहाइले अनुमोदन गरे मात्र पास हुन्छ ।